Albert sy Kupfer: Mpanjifa 2 tsara indrindra ho solon'ny ati-doha | Avy amin'ny Linux
Na inona na inona karazana Operating System izay ampiasaintsika ary na ny solosaina aza, satria tsy misy miafina, izay tsara kokoa hatrany ny fampiasana ny klavier amin'ny fomba mibahan-toerana ny fampiasana ny ankamaroan'ny saika manokana totozy (totozy).
Ary noho izany antony izany, amin'ny maro Rafitra sy fangatahana miasa, antsoina hoe hitsin-dàlana fitendry (hotkeys) na ilay antsoina hoe Mpandefa, momba ny hetsika na fampiharana, mankany manatsara ny famokarana mpampiasa. Ao amin'ny antsika GNU / Distros Linux manana ohatra tsara isika, ny iray amin'izany dia ilay antsoina hoe application "Atidoha", izay noresahantsika tato ho ato dia noresahintsika, ary ny sasany hafa momba ny 2 izay horesahintsika anio. Izy ireo dia "Albert sy Kupfer".
Ny lohahevitry ny famokarana mpampiasa momba ireo Operating System samihafa, mety tsy dia misy dikany ho an'ny mpampiasa iraisana izy io, fa ho an'ireo izay matihanina amin'ny teknolojia na avy amin'ny faritra iasana hafa dia zava-dehibe izany Aza asiana fihetsika mifandraika amin'ny fampiasana mahery ny kitihana totozy hanao hetsika isan'andro miverimberina na tsingerina.
Ary amin'izany lafiny izany, GNU / Distros Linux, ankoatry ny maro hafa endri-javatra mahafinaritra, manana safidy tsara dia tsara ho an'ny mpandefa fampiharana na hetsika hialana amin'ireo asa monotonous toy izany mampihena ny fampiasana totozy, amin'ny hetsika toy ny, mankanesa any amin'ny menio fisoratana anarana ary mandehana fampiharana na mandehana amin'ny terminal ary mihazava baiko.
1 Pitchers: Albert sy Kupfer hampitombo ny vokatra
1.3 Mpandefa fampisehoana hafa
Pitchers: Albert sy Kupfer hampitombo ny vokatra
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, Albert dia mpandefa nofaritana toy izao:
"Launcher afaka miditra amin'ny zava-drehetra tsy misy ezaka velively. Noho izany dia mahavita mihazakazaka rindranasa, manokatra fisie na ny làlany (lahatahiry / lahatahiry), manokatra tsoratadidy ao anaty tranokala, mikaroka ao amin'ny Internet, manisa zavatra ary maro hafa. Albert dia mpandefa agnostika amin'ny birao, izay tanjon'izy ireo dia ny fampiasana sy ny hatsarana, ny fampisehoana ary ny fanitarana. Nosoratana tamin'ny C ++ ary mifototra amin'ny rafitra Qt. Izy io dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPL, loharano maimaimpoana 100% ary loharano misokatra".
Handeha ho an'ny kinova miorina laharana 0.16.1 Daty 12 / 2018, ary manana tranokala ihany koa ao GitHub.
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, Kupfer dia mpandefa iray nofaritana toy izao:
"Kupfer dia mpifanerasera amin'ny fidirana haingana amin'ny fampiharana sy ny antontan-taratasin'izy ireo. Ny fampiasana mahazatra indrindra dia ny mahita fampiharana manokana ary mandefa azy. Nanandrana nanamora ny fanitarana an'i Kupfer niaraka tamin'ny plugins izahay mba hahafahan'ity paradigma fidirana haingana ity hitatra amin'ny zavatra maro kokoa noho ny fampiharana fotsiny. Manantena izahay fa hahafinaritra ny fampiasana Kupfer. "
Handeha ho an'ny kinova miorina laharana 3.19 Daty 03 / 2017, ary manana tranokala ihany koa ao GitHub.
Mpandefa fampisehoana hafa
Eny ianao, misy antony tsy hampiasaina toy ny fampiharana mpandefa a Brain, Albert na Kupfer, aleonao misafidy iray tianao Ulaunchertoy ny, ny hafa rehetra dia efa lany andro, nilaozana, na havaozina lavitra kokoa, fa ho an'ny tontolo birao manokana. Ulauncher Izy io dia mpandefitra maoderina, havaozina, tohanana, misy add-on marobe ary tsy miankina amin'ny tontolo Desktop manokana. Noho izany, tsy ho ela izahay dia hamoaka momba izany.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Albert y Kupfer», izay 2 tena tsara fampiharana fampiharana ny karazany Mpandefa, tsara toa Atidoha sy Ulauncher; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Albert sy Kupfer: sinibe roa tsara indrindra ho solon'i Cerebro
Raha tsy efa nohavaozina ela be i Kupfer dia heveriko fa efa hafoina, io p ...
Arahaba Teo! Manantena aho fa tianao ny atiny ary ilaina izany.
Mazava ho azy fa mpandefa an-tsambo maro no ao anaty mode freeze na aolo. Ireo izay mijanona maoderina kokoa sy miasa kokoa dia ho ahy, Cerebro ary Ulauncher. Tafasaraka na miaraka izy ireo dia tsara miaraka amin'ny antsipirihany, izay azo antoka fa hiankina amin'ny Distro izay azo ampiasaina. Hiara-hampiasa azy ireo amin'ny solosainko aho, satria tsy nanome olana tamiko izy ireo satria matanjaka matanjaka ary miasa tanteraka amin'ny MilagrOS 2 (MX Linux 19) aho.
Logan dia hoy izy:
Mamaly an'i Logan
Miarahaba anao Logan! Araka ny hitanao eto dia nanoro hevitra an'i Ulauncher izahay fa tsy ho fanoloana an'i Brain fa ho famenony, satria mandany loharanom-pahatsiarovana RAM be dia be i Ulauncher. Manoro hevitra aho ny hampiasa azy io tsy misy fanitarana miaraka amin'i Cerebro.
Firefox 77, kinova misy fiovana miompana indrindra amin'ny mpamorona
Stratis 2.1 dia miaraka amina fanohanana ny encryption partition mampiasa LUKS2